अमेरिकामा गाजा खाँदा जागिरबाट निलम्बित
– विजय थापा वाशिंगटन डिसी । अमेरिकाको कोलोराडो राज्यको सर्बोच्च अदालतले कुनै पनि मालिकले आफ्ना कर्मचारीले गाजा खाएको पाईएमा निलम्बन गर्न सक्ने छन् भनी फैसला गरेको छ । कोलोराडो राज्यमा चिकित्सकको निर्देशन अनुसार ओखतीको...
५७ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरी नै प्रहरीको नियन्त्रणमा
पाँचथर, १ असार । जिल्लाको अमरपुरस्थित इलाका प्रहरी चौकी भालुचोकमा कार्यरत प्रहरी जवान दीपेश चौधरीलाई बलात्कार अभियोगमा नियन्त्रणमा लिइएको छ । स्थानीय ५७ वर्षीया एक महिलालाई बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोगमा उनलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको...
निशुल्क घर बनाइदिन्छु भन्नेर आश्वासन दिनेहरू कता हराए ?
काठमाडौं, १ असार– भूकम्पपीडितका लागि यति वटा उतिवटा घर बनाइदिन्छौं भनेर घोषणा गर्नेहरु अहिले बिलाएका छन् । उनीहरुको घोषणा अहिलेसम्मको हकमा प्रचारमै सिमित भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटीले १...
एनजिओले भूकम्पपीडितलाई ल्याएको ठूलो रकम आफै सिध्याएको तथ्य सार्वजनिक
काठमाडौं, १ असार । भूकम्पपीडितलाई विदेशीले दिएको अनुदानको ठूलो हिस्सा उनीहरु आफैंले विभिन्न नाममा सिध्याएको सरकारी अध्ययनले औंल्याएको छ । गृहमन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदानको ठूलो अंश दातृ राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले...
किन अत्याचार गर्दैछ भारतले नेपालीमाथि ?
कपिलवस्तु, १ असार । कपिलवस्तुको पश्चिमी भागमा भारतीय सीमामा पर्ने गौतमबुद्ध साझेदारी वनक्षेत्रमा वृक्षरोपणका लागि तारबार गर्दा भारत सीमा सुरक्षा बलले रोक लगाएको छ। नेपाल-भारत सीमास्तम्भ ५७८ नजिक अर्रा नदीको किनारमा रहेको नेपाली भूमिमा...
अभिभावकसँग चढ्दै नचढेको बसको भाडा असुल्दै राजधानीका निजी विद्यालयहरू
काठमाडौं, १ असार । भूकम्पपछि एक महिनासम्म सबै शैक्षिक संस्थामा पठनपाठन पूर्ण रूपमा बन्द भए पनि राजधानीका केही निजी विद्यालयले त्यस अवधिको शिक्षण शुल्कसँगै यातायात र अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क पनि असुल्न थालेका छन्। उनीहरूले...
गर्भ रोक्न आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको बिक्री बढ्यो
काभ्रे, १ असार । भूकम्पपछि त्रिपाल र टहरामा बस्दै आएका बेला असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट रहनसक्ने गर्भ रोक्न आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधि सेवन गर्ने बढेका छन् । गर्भ रोक्न आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको बिक्री बढ्दै गएको काभ्रेका स्वास्थ्यकर्मीले...
‘यादव एमाले पृष्ठभूमिमा रहँदा राईका कार्यकर्ता थिए’
काठमाडौं, १ असार । तीन वर्षअघि एमालेका प्रभावशाली उपाध्यक्ष थिए अशोक राई । एमालेभित्र राम्रै हालीमुहाली थियो उनको । नम्र र भद्र नेतामा गनिने उनी महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्ष बनेका थिए ।...
जहाँ संविधान बनाउने नाममा कर्मचारीले यति धेरै तलवभत्ता बुझ्छन्
काठमाडौं, १ असार । सभासदले मासिक कति तलवभत्ता बुझ्छन् ? धेरैलाई थाहा होला र संसद सचिवालयका तल्लो तहका कर्मचारीले बुझ्ने तलवभत्ता सुन्ने जो सुकैले जिब्रो काट्छन् । किनकि, सचिवालय आफैँले निर्णय गर्न पाउने संसद...
अधिकारी हत्या प्रकरण: यी हुन् बेलायतमा लुकेका अभियुक्त
काठमाडौँ, ३२ जेठ । गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याका मुख्य अभियुक्त रुद्र आचार्यलाई नेपाल फर्काउन प्रहरीलाई दबाब दिइएको छ । प्रहरीले आचार्यको नाममा रेड कर्नर नोटिस जारी गरे पनि बेलायतमै लुकेर बसेपछि कृष्णकी आमा...
२४ घण्टापछि नेपालमा फेरि भूकम्पको धक्का
काठमाडौं, ३२ जेठ । नेपालमा सोमबार फेरि भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भएर आज दिउँसो ३ बजेर ५२ मिनेटमा नेपालमा फेरि भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो...
अमेरिकामा नेपालीहरुले कसरी धन कमाउँछन् ?
– विजय थापा धनको डकार कहिले पनि आउँदैन । यही धनका लागि मानिसले जे पनि गर्छ । धनको लागि दिन रात मानिस पछि लाग्दछन । र, विश्वमा जोगी र केही अपबाद बाहेक सबैजना सम्पत्तिकै पछाडि कुँदिरहेका...
« 1 … 5,928 5,929 5,930 5,931 5,932 … 6,905 »